इन्द्रेणीको मूनस्टोन अर्थ र उपचार गुणहरू - भिडियो
ट्याग Moonstone, इन्द्रेणी, इन्द्रेणी मूनस्टोन
इन्द्रेणीको मूनस्टोन अर्थ र उपचार गुणहरू। निलो शीन मूनस्टोन मूल्य।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक इन्द्रेणीको मूनस्टोन किन्नुहोस्
इन्द्रेणीको मूनस्टोन बनाम मूनस्टोन
मूनस्टोन orthoclase feldspar हो। यसमा KAlSi3O8 (पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अक्सिजन) को रासायनिक संरचना छ। मूनस्टोन सेतो, क्रीम, खरानी, ​​चाँदी, आड़ू, कालो सहित विभिन्न र inहरूमा पाउन सकिन्छ। जब उनीहरू वयस्कता प्रदर्शन गर्छन्, यो रंगीन फ्ल्याश होइन जस्तो तपाईले पेनबो मूनस्टोनसँग फेला पार्नुहुनेछ।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन एक प्लेटियोक्लास फेलडस्पार हो। यसमा (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (सोडियम, क्याल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अक्सिजन) को रासायनिक संयोजन छ। यो labradorite को लागी उही रासायनिक संरचना हो। नाम मूनस्टोनको बावजुद, यो वास्तवमा सेतो लाब्राडोराइट हो। त्यसकारण यो ढु stone्गाको लाब्राडोरसेन्स घटना छ जुन हामी लाब्राडोराइटमा पाउँछौं। यसले प्रायः कालो टूमलाइन समावेश गर्दछ।
अन्य Feldspar रत्नहरू जस्तै एमेजोनাইট र labradorite, यो रसायन, घर्षण, तातो, एसिड र अमोनिया प्रति संवेदनशील छ। यस रत्नको साथ कहिल्यै स्टीमर, तातो पानी वा अल्ट्रासोनिक क्लीनर प्रयोग नगर्नुहोस्। हल्का साबुन र कोठाको तापक्रमको पानीको प्रयोग नरम कपडाले रत्नको चमकलाई कायम राख्नको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
निक्षेप क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, मेक्सिको, म्यानमार, रूस, श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिका मा अवस्थित छन्।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन अर्थ र उपचार गुणहरू
रत्नले सन्तुलन, सद्भाव र आशा ल्याउँछ जबकि सृजनात्मकता, अनुकम्पा, सहनशीलता र भित्री विश्वास बढाउँदछ। यो अन्तर्ज्ञान र मानसिक बोधलाई मद्दत गर्दछ, विशेष गरी हामीलाई तत्काल स्पष्ट नहुने चीजहरूको दर्शन प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। किनकि यसले हामीलाई सुरुnel दर्शनबाट बच्न मद्दत गर्दछ, हामी अन्य सम्भावनाहरू हेर्न सक्षम छौं। यो प्रेरणा को एक फ्लैश जस्तै छ कि जब हामी खुला र शान्त छौं आउँछ। जब हामी यो ढु stone्गा लगाउँछौं, जीवन परिवर्तन प्रेरणा अधिक र अधिक प्राय: हुन सक्छ।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन कुनको लागि राम्रो हो?
ढु stone्गाले सन्तुलन, सद्भाव र आशा ल्याउँछ जबकि रचनात्मकता, अनुकम्पा, धीरज र भित्री विश्वास वृद्धि गर्दछ। यो अन्तर्ज्ञान र मानसिक बोधलाई मद्दत गर्दछ, विशेष गरी हामीलाई तत्काल स्पष्ट नहुने चीजहरूको दर्शन प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
तपाइँ इन्द्रेणीको मूनस्टोनको कसरी ख्याल गर्नुहुन्छ?
धेरै रत्नहरू जस्तै, मूनस्टोन नाजुक हुन्छन् र सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गरिनु पर्छ। सफा गर्न को लागी सफा गर्न हल्का साबुनको साथ न्यानो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं एक नरम bristled ब्रश पनि यदि आवश्यक छ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, नरम कपडाले मात्र सुक्नुहोस्
तपाइँ कुन औंलामा इन्द्रेणीको मूनस्टोनको औठीमा लगाउनुहुन्छ?
यस ढु stone्गाबाट अधिक फाइदा लिनको लागि यसलाई स्टर्लि silver चाँदीको औठीमा लगाउनु नै उत्तम तरिका हो। ज्योतिषशास्त्रले पनि सिफारिस गर्दछ कि ममस्टोन दायाँ हातको सानो औंलामा उत्तम रूपमा लगाउँदछ।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन वास्तविक छ भने तपाईं कसरी बताउन सक्नुहुन्छ?
ढु stone्गा यसको विशेषता adularescence द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ, जो प्रकाश वा चमक को एक आन्तरिक स्रोतको रूपमा देखा पर्दछ। यो orthoclase मूनस्टोनबाट यसको उच्च अपवर्तक सूचक र उच्च विशिष्ट गुरुत्वाकर्षणबाट छुट्याउन सकिन्छ।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन प्राकृतिक छ?
हो यो रंगहीन लाब्राडोराइट हो, निकटतासँग सम्बन्धित फेलडस्पर खनिज विभिन्न इरिडसेन्ट र colorsहरूमा विभिन्न प्रकारको शीनको साथ। यद्यपि यो प्राविधिक रूपमा मूनस्टोन होइन, यो यति धेरै मिल्दोजुल्दो छ कि व्यापारले यसलाई आफ्नै अधिकारमा एउटा रत्नको रूपमा स्वीकारेको छ।
इन्द्रेणीको मूनस्टोन कत्तिको गाह्रो छ?
यसमा to देखि .6..6.5 को कडाई छ, जुन बहुमूल्य ढु stones्गाको तुलनामा केही नरम देखिन्छ, तर लगाउनको लागि कडा छ।
इन्द्रेणी निलो मूनस्टोनको मूल्य के हो?
पारदर्शी सामग्री, कि त सेतो वा मनमोहक शरीरको रंग र वयस्कताको साथ, बजारमा एकदम सामान्य छ र अपेक्षाकृत सामान्य मूल्यहरू आदेश दिन्छ।
हाम्रो रत्नको पसलमा प्राकृतिक इन्द्रेणीको मूनस्टोन किन्नुहोस्
कालो तारा मूनस्टोन
ट्याग कालो, कालो तारा, Moonstone, तारा
ट्याग स्फतीय, Moonstone
बिरालाको आँखा मूनस्टोन
ट्याग बिरालो आँखा, Moonstone